About us - XUZHOU MINYAN UKUNGENISA NOKUTHOLA UKUTHUTHA UKUHWEBA CO., LTD
Abembiwa bethu be-Hydraulic Export abayizinga eliphansi emkhakheni wokwakha, ukusebenza, amandla nokusebenza okuhlukahlukene. Amabhakede ethu we-Excavator afanisa umshini nomsebenzi futhi anikeze ukusebenza okuhle kakhulu kuhlelo lwakho lokusebenza. Noma ngabe yinkwali, indawo yokwakha noma ukwakheka komhlaba - Amabhakede ethu agxila ekusebenzeni ngokuphelele komshini emsebenzini owenziwayo bese uqedela umsebenzi kahle.
Ucwaningo oluningi nempendulo yamakhasimende emhlabeni wonke ihlanganiswe ekwakhiweni kwebhakede ngalinye. Ukusebenza okujabulisa amakhasimende kusenhliziyweni yemodeli ngayinye yebhakede. Kunezinhlobo eziningi zamabhakede we-excavator ajwayelekile futhi akhethekile atholakala nezixazululo zokumba, ukumbiwa, ukulayishwa nokuqedwa. Sine minyaka eminingi ifa lokuklama nokukhiqiza amabhakede we-excavator emhlabeni jikelele. Ungathembela kwikhwalithi yangempela eyakhelwe kuwo wonke amabhakede. Amabhakede ethu athuthukiswa futhi ahlolwa ngama-Excavators ukuhlinzeka uhlelo ngokusebenza okuthembekile nokwethembeka. Eyenzelwe Ukugcina Amabhakede aklanyelwe futhi akhelwe ukucaciswa - okuqinisekisa ikhwalithi nokuqina. Insimbi enamandla kakhulu inikela ngokuqina ngaphandle kokudinga amapuleti aminyene, asindayo futhi inika impilo ende nokulayishwa okukhulu kwamaholo. Amabhakede ethu anokuphila okungaphezulu kokugqoka okungu-50% uma kuqhathaniswa nezimbangi ezithandwayo. Amabhakede ethu anikezela ngokusabalalisa okuphelele lapho kunamathiselwa khona emshinini. Ukuma kwamaBhakede kuklanywe ngokugqoka kahle, ukukhuphuka kwamandla, nokuncipha kokugcinwa njengezinto ezibalulekile.
Sakha ikakhulukazi zonke izinhlobo zebhakede le-excavator, njengebhakede iMini, ibhakede lomhlabathi, ibhakede ledwala, ibhakede lesikrini, i-coupler esheshayo, amazinyo ebhakede nezinye izingxenye ezigugile nezidabukile ezilungele i-excavator. Futhi singakhiqiza zonke izinhlobo zamabhakede we-excavator ahlukile ngokuya ngezidingo zakho. Siyakwamukela uphenyo singaqinisekisa intengo ephansi kakhulu ngekhwalithi ephezulu kakhulu.